Blogger of this week : Bhoomika Tuladhar - MeroReport
Blogger of this week : Bhoomika Tuladhar
सानै देखी लेख्न साह्रै रुचाउने बानीले गर्दा ब्लगिङ गर्न थालेकी भुमिका तुलाधर ब्लगमा आफ्नो मनमा लागेको कुरा लेख्ने गर्छिन । उनको विचारमा ब्लग आफ्नो बिचार राख्ने सशक्त माध्यम हो । उनले समाजका कुरिती, कुप्रथा एवम आफुलाई असन्तुष्ट लागेका बिचारहरु ब्लगमार्फत पोख्ने गरेकी छिन । सरस्वतीनगर, चाबहिल, काठमाडौंमा बस्दै आएकी भुमिकाले त्रिभुवन विश्वविध्यालयबाट ईलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक र काठमाडौं विश्वविध्यालयबाट प्रोजेक्ट म्यानेज्मेन्टमा एमबिए गरेकी छिन । हाल उनी डेनिश ट्रेड युनियन काउन्सिल अफ डेभलपमेन्ट कोअपरेशन साउथ एसियन सब रिजनल अफिस अनामनगरमा प्रोग्राम अफिसरको रुपमा कार्यरत छिन । अध्ययन र पेशाबाहेक संगीतमा उनी विशेष रुची राख्छिन र उनलाई घुम्न मन पर्छ । आफ्नो अभिव्यक्ती पोख्न ब्लगिङ गर्ने भुमिकालाई यस पटक साताको ब्लगरको रुपमा प्रस्तुत गरेका छौँ । हामीले उनीसँग ब्लग र सोसिअल मिडियाको बारेमा केहि कुराकानी गरेका छौँ :
ब्लग र ब्लगिङ सम्बन्धित केहि कुरा गरौँ । कहिलेदेखि ब्लगिङ गर्न थाल्नु भयो ?
ब्लगिङ गर्न थालेको त फेब्रुअरी २०११ देखि मात्र हो, तर यस क्षेत्रमा रुची भने धेरै अगाडीदेखि नै थियो । ब्लगस्पटमा गर्न थालेको चाहिँ लगभग १ बर्ष भैसकेछ ।
कसरी ब्लगिङतिर आकर्षित हुनुभयो ?
सानैदेखि लेख्ने बानी थियो, लेख्न कोर्न मन लाग्थ्यो । त्यही लेख्ने बानी नछुटोस् भनेर गम्भीर भएर ब्लगिङ गर्न थालेकी हुँ । ब्लग आफ्नो बिचार राख्ने ससक्त माध्यम हो भन्ने मलाई लाग्छ । समाजका कुरिती, कुप्रथा एवम् आफुलाई असन्तुष्ट लागेका बिचारहरु पोख्ने माध्यमको रूपमा मैले ब्लगिङलाई लिएकी छु ।
मेरो ब्लगमा समसामयिक विषयहरु देखि लिएर मेरो आफ्नै व्यक्तिगत कुराहरु पनि आदानप्रदान गर्ने गरेकी छु । तर विशेषगरी कुनै एउटा ठोस विषयसम्बन्धी नै रहेर मैले ब्लगिङ गरेकी होईन । मन मष्तिकमा खेल्ने साधारण कुरा, कौतुहलतादेखि लिएर देशमा भइरहेको जटिल राजनैतिक अवस्थाको बारेमा मेरो ब्लगमा पढ्न पाइन्छ । स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्दा आमजीवनमा देख्न पाइने विडम्बना र ब्यङ्यका उदाहरणहरुलाई आफ्नो ब्लगमा उतार्ने कोशीस गर्छु । .
अघि भने जस्तै ब्लगिङ गर्नु भनेको लेख्ने बानी नछुटाउनका लागि सुरु गरेको मेरो लेखन अभ्यास हो । तर कहिलेकाहिँ आफु वरिपरि भएका कतिपय कुराहरु चित्त नबुझ्दा पनि ब्लगको नै सहायता लिन्छु । कसैको ब्लग तपाईं पढ्नु हुन्छ भने उसको ब्यक्तित्वको बारेमा बुझ्न सक्नु हुन्छ । अझै स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा, लेखाइले मानिसको ब्यक्तित्व दर्साउँछ जस्तो लाग्छ मलाई । सायद ब्लगरको ब्यक्तित्वको एउटा हिस्सा नै उसको ब्लग हो कि जस्तो लाग्छ मलाई ।
भ्याएको बेला त आधी दिन जस्तो ब्लगिङ गरेर बित्छ । फुर्सत नभएको बेलामा भने दिनमा एक दुइ पटक ब्लग खोल्छु तर केहि लेख्दिनँ ।
पछिल्लो पटक मैले आफ्नो ब्लगमा चक्काजामको गुनासो पोखेको थिएँ । चक्काजामबाट दिक्दार भएर अफिस आइपुग्नु परेको ब्यथालाई निर्धक्कसँग ब्लगमा पोखेकी छु ।
तपाईंको ब्लगमा कतिको भिजिटर हुनुहुन्छ, ब्लगको ट्राफिक कस्तो छ ?
मेरो ब्लगको स्ट्याटस हेर्नु भयो भने सदस्य त धेरै छैनन्, तर पेज भ्यू भने ३,९२७ जति छ ।
कस्तो प्रतिकिया पाइरहनुभएको छ आफ्नो ब्लगमा ?
आजसम्म त पोजिटिभ नै प्रतिकृयाहरु पाइरहेको छु, भविष्यमा हेर्दै जाउँ ।
अवश्य । ब्लगिङले समाजका कुरितीहरुको बारेमा धेरै आवाजहरु उठाइ सम्बन्धित निकायहरुको यसमा ध्यानाकर्षण गर्न सक्छ । ब्लगिङ एउटा कला हो । यो कलाको माध्यमले तपाईंले अफुलाई चित्त नबुझेका कुराहरुलाई आम मानिसबिच प्रस्तुत गर्न सक्नु हुन्छ ।
सोसियल मिडिया कत्तिको प्रयोग गर्नु हुन्छ र विशेष गरी के चलाउनुहुन्छ ?
फेसबुक चलाउँछु । तर हाल व्यस्तताका कारण सोसिअल नेट्वोर्किङ मिडियातिर त्यति भिज्न मन लाग्दैन ।
सोसिअल मिडियाले युवाहरुमा के प्रभाव पारेको छ ?
दुवै किसिमले प्रभाब पारेको छ । तर म गिलास आधा रित्तिएको भन्द आधा भरिएको छ भन्न रुचाउँछु । त्यसैले मलाई लाग्छ नेट्वोर्किङमार्फत धेरै दबिएका र हेपिएका विषयहरुलाई प्रकाशमा ल्याउन सकिन्छ, जुन राम्रो हो ।
तपाईं सोसिअल मिडियामा आउनु भन्दा अगाडी, आइसकेपछीको जीवनशैलीमा के परिवर्तन पाउनुभएको छ ?
पाएकी छु । नेटवर्किङ आइसकेपछी चेतना स्तर पनि बढेको छ जस्तो लाग्छ । साथै धेरै पुराना साथीहरुसँग नजिकिने मौका पनि पाएकी छु ।
अब एकैछिन मेरोरिपोर्टको कुरा गरौँ । नागरिक पत्रकारिताको प्रवर्धन गर्न सुरु भएको मेरोरिपोर्टको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
बिस्तारै मेरो रिपोर्टको बारेमा थाहा पाउँदै छु । मेरोरिपोर्टले गरेको प्रयास राम्रो लाग्यो, मैले कसरी सहयोग पुर्‍याउन सक्छु त्यसको लागि म अग्रसर छु ।
भुमिकाको ब्लग लिङ्क : http://crabdiaries.blogspot.com/
Comment by Shaku Limbu on April 24, 2012 at 4:09am
badhai cha hai mero tarfa bata pani. :)
Comment by एसवी गौतम on April 21, 2012 at 4:53pm
congratulation hajur !
Comment by Ajeeta Sigdel on April 19, 2012 at 11:22am
Comment by Indra Dhoj Kshetri on April 18, 2012 at 4:36pm
Congratulations Bhumikaji. Keep writing. We will be reading.
Comment by ramesh khatri on April 18, 2012 at 4:25pm